Cabdul Wahaab Al Saacidi : Waa kuma janaraalka muranka badan ka dhaliyay gudaha Ciraaq? - Jigjigaonline
[ October 20, 2019 ] “Haddii Isku Duubni Jirto In Dhul Soomaaliyeed Meel Kale La Geeyo Ma Dhacdeen, Kuwii Hadhka Cad Dhulka Wareejiyeyna Waxay Ahaayeen …” – Madaxweyne Mustafe	Somalida
[ October 18, 2019 ] AKHRISO: Qodobbada Kasoo Baxay Kulankii Ra’iisal Wasaare Abiy Ahmed La Yeeshay Madaxweyneyaasha DDS Iyo Canfarta	Somalida
[ October 18, 2019 ] Shacabka DDS Oo Mudaharaadyo Waaweyn Ku Taageeray Dhibbaneyaasha Gobolka Sitti, Farriinna U Diray Qawleysatada TPLF	Somalida
[ October 17, 2019 ] Trump: Erdogan “ha is adkeynin, nacasna ha iska dhigin”	Wararka Caalamka
[ October 17, 2019 ] Trump: Duullaanka Turkigu ku qaaday Suuriya ma aha mid ka dhan ah Mareykanka	Wararka Caalamka
HomeWararka CaalamkaCabdul Wahaab Al Saacidi : Waa kuma janaraalka muranka badan ka dhaliyay gudaha Ciraaq?
Cabdul Wahaab Al Saacidi : Waa kuma janaraalka muranka badan ka dhaliyay gudaha Ciraaq?
October 4, 2019 admin Wararka Caalamka, Wararka Maanta 0
Baghdad (JigjigaOnline) – _
Dalka Ciraaq waxaa maalmihii lasoo dhaafay ka dhacay dibadbaxyo rabshado wata oo looga soo horjeeday musuq maasuqa iyo shaqo la’aanta ka taagan dalkaas, waxaana rabshadahaas ku dhintay tiro dad ah halka dadka kalena ay ku dhaawacmeen.
Dibadbaxyaasha waxay ku dhawaaqayeen hal ku dhigyo ka dhan ah xukuumadda Ciraaq, waxay sidoo kale ka careysnaayeen in Janaraal Cabdul Wahaab Al Saacidi in laga qaado xilkii taliyaha ciidammada la dagaalanka argagixisada kaas oo loo wareejiyay wasaaradda gaashaandhigga ee Ciraaq.
Go’aanka lama filaanka ah ee xilka looga qaaday janaraal Cabdul Wahaab wuxuu Ciraaq ka dhaliyay muran badan, waxaana waddooyinka magaalada Baqdaad buux dhaafiyay dadweyne ka careysnaa tallabadaas.
Waa kuma Janaraal Cabdul Wahaab Al Saacidi?
Janaraal Cabdul Wahaab Al Saacidi wuxuu sannadkii 1963-dii ku dhashay degmada Sadra City oo ka tirsan magaalada caasimadda ah ee Baqdaad.
Sannadkii 1985-kii wuxuu ka qalin jebiyay kuliyadda ciidammada militariga ee Ciraaq.
Wuxuu soo shaac baxay xilliggii dagaalka lagula jiray ururka la magac baxay Dowladda Islaamka, wuxuu hoggaaminayay dagaalkii dib loogu qabsaday magaalada Mowsil kaddib muddo 9 bilood ah oo magaalada lagu hareereysanaa sannadkii 2017-kii.
Markii uu dhacay maamulkii gobolka Anbar ee dalka Ciraaq wuxuu Cabdul Wahaab hogaaminayay ciidammada la dagaalanka argagixisada iyo ciidamo gaar ah kuwaas oo xoreeyay deegaanno dhowr ah oo ka tirsan koonfurta magaalada caasimadda u ah gobolka Anbar ee Ramadi.
Janaraal Cabdul Wahaab Al Saacidi wuxuu afar jeer ku dhaawacmay dagaalladii ka dhanka ahaa ururka IS.
Xukuumadda Mustafe Cagjar Oo Madax-furasho Kusii Deynaysa Dhallinyarii Reer Jigjiga
Gabadh derbi jiif ahayd oo mudo kooban caan ku noqotay
“Haddii Isku Duubni Jirto In Dhul Soomaaliyeed Meel Kale La Geeyo Ma Dhacdeen, Kuwii Hadhka Cad Dhulka Wareejiyeyna Waxay Ahaayeen …” – Madaxweyne Mustafe
AKHRISO: Qodobbada Kasoo Baxay Kulankii Ra’iisal Wasaare Abiy Ahmed La Yeeshay Madaxweyneyaasha DDS Iyo Canfarta
Shacabka DDS Oo Mudaharaadyo Waaweyn Ku Taageeray Dhibbaneyaasha Gobolka Sitti, Farriinna U Diray Qawleysatada TPLF
“Ma Jirto Sabab Aad Ku Xalaashan Karto Qof Binu-aadam Ah Naftiisa” – MW Mustafa Oo La Hadlayey Dadkii Ka Badbaaday Xasuuqii Bulladari
Khasaaraha Shacabka Gobolka Sitti Kasoo Gaadhay Weerarrada Canfarta Iyo Xaqiijinta Guddoomiye Maydhane
Cabdirashiid Cali Shucaac Iyo Aabbihii Oo Dil Loogu Hanjabay
“Soomaali baan ahay waxaana ka mid ahay shiicada u lugeyneysa Siyaarada Karbala”
Khilaafkii Doorashooyinka Somaliland Oo Dib Usoo Laabtay Iyo Xisbiga Waddani Oo Hakiyey Xubintii Komishanka Doorashooyinka Ay Usoo Xuleen